all courses • Baro Xirfad -waxkabaro.net
Maxaad dooneysa in aad barato?
Koorsoyinkan mid ka xulo
Hadii aadan baran maanta xirfada kaa maqan, waxa laga yaaba biri in aad ka shalaayi doonto.
Koorsoyinkaan waa kuwaa u baahneed ee mid ama laba iska so diwan gali.
Markii aad dhameyso waxaa ka mid naqan doontaa dadka xirfadahooda Shuuqa Shaqada looga baahan yahay haduu allah idmo
Ku so dhawaada barashada naqshadeenta guryaha adigo isticmaalayo barnaamishka Archicad.
Qiimaha koorsada oo idil waa 10 dolar.
4 bil ayee kuu Furnaan doontaa.
3) Nagala soo xidhiidh Whatsapp +252616978872 is lagu diwan galiyo
Is Diwan Gali
Waa koorso kamida koorsooyinka lagu qaato jaamadacadaha gaar ahaan qaybaha ganacsiga iyo dhaqaalaha (Business and economics departments), sidoo kale koorsadani waxay muhiim u tahay dhamaan ganacsatada yaryar iyo waaweynba, waxaanay waxbadan ka bedeli doonto aqoontaada iyo xirfadaada ku aadan ganacsiga.
Qiimaha koorsada oo idil waa 12 dolar.
4 bil ayeena furnaan doontaa.
3) Nagala soo xidhiidh Whatsapp +252616978872 si laguu diwan galiyo
Koorsadaan waa koorso loogu talo galay in eey ardayda si fudud ugu bartaan luuqada carabiga.
Muuqaalkaan daawo uu macalinka ku sharxayo qeybaha eey ka koobantahay koorsada iyo mudada eey soconeso
Qiimaha waa 10 dolar bishii.
3 bilood ayeena soconesa.
3) Nagala soo xidhiidh Whatsapp +252616978872 si lagu diwan galiyo
Qeybaan waxaa ku qaadan doontaa book one yadoo laga dhisi doono luuqada aasaaskeeda.
Waxaad ku baranesa waxyaabo eey ka mid yihin:
Higaada iyo ku dhawaaqista xarfaha luuqada englishka.
Dhisida jumlooyinka fudud fudud
Grammarka aasaasiga ah
Vocabulary ama erayo maalmeedka ku anfacayo
Xirfada qorista iyo aqrinta luuqada.
Qiimaha waa 10 dolar bishii(iyo 5 dolar is diwan galin ah).
Mudada waa 2 billood .
3) Nagala soo xidhiidh Whatsapp +252616978872 is laguu diwan galiyo
Qeybaan waxaa ku qaadan doontaa BOOK TWO ee koorsada ENGLISH INSIDE OUT. waxaana halkoodi ka sii socon doono waxyaabihi aan ku soo baranay qeybtii aasaasiga ee book oneka.
Qiimaha waa 10 dolar bishii(iyo 5 dolar is diwan galin ah)​.
Qeybaan waxaa ku qaadan doontaa BOOK THREE ee koorsada ENGLISH INSIDE OUT yadoo laga dhisi doono luuqada dhan walob.
lots of reading and writing practice.
Deepening your vocabulary.
Qiimaha waa 15 dolar bishii
(iyo 5 dolar is diwan galin ah).
This level will be English to English. If you don’t understand what the teacher is saying then this level is not for you. I recommend you go with the beginner or intermediate level.
In this level you are going to level
And many more advanced features of the course.
Qiimaha waa 20 dolar bishii
Professional Quickbooks Pro
Barashada program-ka ama software- xisaabeedka maaliyada ee caalamiga ah.
Ugu baro program-kan afkaaga hooyo (luuqada somaliga) si heer caalami ah, kadibna ugu shaqo tag si fudud.
Barashada program-kan kadib waxaad awood buuxda u yeelan doonta;
ku shaqaynta si dhamaystiran
u dejinta ganacsatada qaab xisaabeed qurux badan
iyo cilad kasaarista xisaabaadka ganacsiga Hadii lagaa dalbado.
Muuqaalkaan daawo si uu macalinka noogu sharxo waxyaabaha ku baran doonto iyo mudada
2 bil ayena kuu furnaan doonta.
Koorsadan Complete hardware and software waa koorso loogu talo galay in dadka bilowga ah eey si wanagsan ugu fahmahan qeybaha kala duwan ee computerka uu ka kooban yahay iyo qaababka loo cilad bixiyo.
Fadlan daawo muuqaalkan si uu macalinka inoogu sharxo waxyaabaha aad ku baran doonto koorsadaan haduu allah idmo
2 bil ayena Ku furnaan doonta.
Koorsadaan Ultimate Photoshop waxaad ku baran doontaa dhamaan wax walbo oo ku saabsan photoshopka iyo sida loogu shaqeyo sida
logos and business cards Designs
Id Card, Cover page, and billboard Designs
Muuqaalkaan daawo si uu macalinka inoogu qarsho ama inoo tuso waxaad ku baran doonto koorsha haduu allah idmo
2 bil ayeena kuu furnaan doontaa.
Koorsadaan waxaad ku baran doonsa sameenta websitayada
maadooyinkaad Ku baran doonto waxaa ka mid ah:
4 bil ayeena kuu furnaan doonta.
Qaabka Onlineka Lacag looga abuuro
Koorsadaan “Qaabka Online-ka Lacag Looga Sameeyo ” Waxaad ku Baran doontaa Dhamaan Qaababka kala duwan ee lacag looga sameen karo Onlineka ama internetka.
Waxeey ku Bilaabaneesa Sharaxaad guud oo ku saabsan qaababka kala duwan ee lacag oga abuuro internetka adigoo gurigaa joogo.
Waxyaabaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah sida:
Amazon Business E-commerce Youtube Channel iyo Waliga Website.
Daawo Videogaan hordhaca ah oo uu macalinka ku sharxayo qaabka uu online businesska ku shaqeyoo
Intensive Micrsoft Excel 2016
Koorsadaan Barashada Microsoft Excel 2016 oo af soomaali waa koorso aad u balaaran oo hadii aad dhameeysato awood buuxda kuu siin doonto in aad ugu shaqeyso microsoft Excel 2016,2013 and 2010 qaab Professional ah. Hadii eey ahaan laheed Xisaab Deginta iyo macluumaad aruuntantaba. Cashirada aad ku baran doonto waxaa ka mid ah:
Fahanka guud ee Microsoft excel 2016
Kushaqeynta Excel formulas sida isku darka, kala jarka, Total Dejinta
Kushaqeynta Excel functions sida if function, VLOOKUP funtion COUNTIF function SUMIF function iyo wixii la mid ah.
excel formatting, hide, move copy columns and rows.
Sida loo hagaajiyo Worksheetka layout-kiisa
nuucyada kala duwanSida loo Print Gareeyo Excell
Sida security loogu sameeyo excel file kaaga.
Daawo Cashar ka mid ah casharada aad koorsada ku baran doonto haduu allah idmo
2 bil ayeena kuu Furnaan doonta.
word 2016- Hagaajinta qoraalada
Koorsadan waxyaabaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah sida qoraalada loogu diyaariyo.
sida paragraphs iyo page layoutka soo sameeyo.
sida loogu shaqeyo themes iyo tables
sida password loogu xiro documentiga aad sameesatay
sida table loo abuuro looguna shaqeyo
sida loo galiyo sawirada iyo charts
Daawo cashar ka mid ah casharada aad ku baran doonto koorsada
Nagu Taageer Howshaan!
Fadlan Asxaabtada Ku dhiiri Gali in eey Ka Fa’ideystan Koorsoyinka.
Oo kaliya u sheeg in eey booqdan websiteka waxkabaro.net ama so dajistaan ablikeshanka waxkabaro.
SOO DAJISO ABLIKESHANKA .
Ablikeshanka isticmaalikisa ayaa aad oga fudud Websiteka